Kedu ihe methenolone enanthate ntụ ntụ mere? | AASraw
Kedu ihe methenolone enanthate ntụ ntụ mere?
/blog/Methenolone Enanthate/Kedu ihe methenolone enanthate ntụ ntụ mere?
Ihe na 03 / 07 / 2018 by Dr. Patrick Young dere na Methenolone Enanthate.
1. Gịnị bụ methenolone enanthate na methenolone enanthate ntụ ntụ?
Methenolone enanthate ntụ ntụ bụ aha chemical nke primobolan (primo). Methenolone enanthate ntụ ntụ na-acha ọcha crystalline ntụ ntụ, na CAS No.303-42-4. Methenolone enantahte na-ejikarị ndị na-achọ ịnọgide na-enwe estrogen na androgenic metụtara mmetụta ndị kachasị dị na ya, ọ bụ ọgwụ na-eme ka a na-ahụkarị Androgenic steroid (AAS) maka egbutu cycles.Methenolone enanthate bu ụzọ wepụta ya na 1962 site Squibb n'okpuru aha ahia Nibal (onu) na Nibal Depot (injectable). Nke a bụ ngwaahịa dị mkpirikpi n'ahịa US ma site na nke 1960 si n'aka ndị na-ahụ maka ọgwụ na Germany bụ Schering ga - enwe ikike niile nye mịbụ Methenolone.
Methenolone enanthate ntụ ntụ nkọwa
aha Methenolone enanthate ntụ ntụ, primo E ntụ
CAS Mba 303-42-4
molekụla Formula C27H42O3
molekụla arọ 414.62100
Melting Point 289-292 ℃
nchekwa temp RT
Methenolone enanthate bụ dihydrotestosterone nke dabeere na ananbolic steroid, methenolone enanthate bụ ihe ngosi ester nke methenolone rere ọtụtụ n'okpuru akara aha primobolan. Methenolone enanthate na-eji ndị mmadụ na-enwe mmetụta dị mma nke estrogenic, na-enwe ezigbo estrogenci kwesịrị ekwesị karịa annadrolone, methenolone n'ụdị enanthate na acetate, methenolone enweghi mmetụta nke estrogenic na mmetụta ya na cholesterol, methenolone bụ alos na-adịghị emeri nke Ebe nchekwa HPTA, n'ihi nke a, ọtụtụ mmadụ na-eji methenolone n'etiti steroid cycles.
2. Kedu ihe methenolone na-eme?
N'ihe gbasara ahụ ike, a na-eji methenolone emeso ndị mmadụ na-ata ahụhụ site na ọnọdụ nke mgbu ahụ na oke nha dị arọ bụ ihe mgbaàmà. Ndị ọzọ na-agụnye: ọnweghị ike maka ndị mmadụ n'otu n'otu na-alụso ọrịa ọgụ, na-emebi ọnọdụ, ihe ọhụụ iji gbochie mmetụta nke ọgwụgwọ corticosteroid dị ogologo, na ọgwụgwọ nke osteoporosis na sarcopenia (uru nke uru dị ka agbatị na nká). Primo, dị ka Anavar, dị ka a gosipụtara na ọ dị nro na mmetụta ọjọọ ya na ejikwala ya na ụmụaka na ụmụ ọhụrụ iji kwalite mmụba bara uru n'ime ụmụ ọhụrụ na-amụbeghị nwa n'enweghị ihe ọ bụla na-egosi ọrịa ma ọ bụ nsí. Onye nwere ike ịhụ ebe ọhụụ nke steroid ahụ anabolic na-abịa site na obodo egwuregwu na ndị na-arụ ọrụ, dịka ọ bụ onyinye nke na-egosipụta mmetụta na-adịghị ike androgenic nke na-enweghị obere mmetụta ọ bụla.
In bodybuilding ubi, ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu na bodybuilders na-ewere methenolone enanthate / methenolone enanthate ntụ ntụ iji nweta ụbụrụ muscle.Methenolone enthate bụ ihe na-ewu ewu karịsịa karịsịa maka ndị na-eme egwuregwu na-etinye aka na mgbatị iji nọgide na-enwe ike dị ka o kwere mee mgbe a na-egbochi calorie. Ọtụtụ ndị na-asọmpi ahụ na-atụ egwu agaghị atụle nchịkọta egwuregwu tupu oge asọmpi na mgbakwunye nke methenolone. Methenolone enanthate bụ moderately ananbolic with a very low androgenic profiles.The mmetụta anabolic na-adaba na DECA durabolin, althought the androgenic effects effects are considerable less. Ihe ndị ị ga - enweta na oge ị ga - enwe ike ị ga - enwe ọganihu dị mma. Ị nwere ike ịtụ anya na ị ga-enweta uru maka ọnwa ole na ole mgbe ị gwụchara.
3. Methenolone enanthate na-eji / methenolone enanthate dosage
Methenolone enanthate ọkara ndụ dị gburugburu 10 ụbọchị. Ntọala ọgwụ methenolone enanthate dosages edepụta 200mg dịka nke mbụ usoro onunu ogwu, tinyere 100mg kwa izu maka usoro ọgwụgwọ zuru ezu. Ọgwụgwọ ahụike a ga-agwọta ga-ekpebi ihe bụ ezigbo ọgwụgwọ zuru ezu. Ogologo a nwere ike ịbụ ebe ọ bụla site na 100mg kwa izu ma ọ bụ izu abụọ na 200mg kwa abụọ ruo izu atọ.
Methenolone enanthate dosage for bodybuilding, athletics, na mmelite arụmọrụ bụ nchegbu, onye mbido Primobolan dosages maka usoro injectable na-amalitekarị n'ihe banyere 400mg kwa izu. Usoro ihe ntanetị nke kachasị na-adịkarị na 400 - 700mg kwa izu, nke kwesịrị ịdị oke, ndị ọkachamara nwere ike ịnwa dị ka 800 - 1,000mg kwa izu. Nwanyi Ntughari ndi ozo na usoro nchedo na ntanata ndi mmadu na-enwekarị na 50 - 100mg kwa izu.
4. Methenolone enanthate mmetụta
Methenolone enanthate mmetụta pụrụ iche gụnyere:
eme ka ntutu isi mechie
ahụ ntutu isi
ịmalite ịmụ nwa na ụmụ nwanyị (nke gosipụtara site na ntutu isi na akụkụ dịgasị iche iche nke ahụ, ihe dị omimi na mmụba nke ndị na-amịpụta),
mmelite dị nro nke mgbali elu
mmebi nke cholesterol ọkwa
ịmepụta mmepụta nke testosterone
ala dị ala nke toxicity imeju
Rịba ama na mmetụta ndị a adịghị njọ ma na-adịgide adịgide. N'ọtụtụ ọnọdụ, ha adịghịdị ewere ọnọdụ. Naanị gị ga-edozi ya n'ụzọ ziri ezi ma ị gaghị enwe nsogbu ọ bụla.
5. Zụta methenolone enanthate ntụ ntụ online
Ebe o siri ike inweta methenolone enanthate dị elu, ọtụtụ ndị ga-achọ ịzụta methenolone enanthate ntụ ntụ, emesịa mee ka methenolone na-agba ọgwụ. Wht bụ ebe kasị mma ịzụta methenolone enanthate ntụ ntụ? Ee, internet. mgbe ị na-achọ methenolone enanthate ntụ ntụ online, ị nwere ike ịchọpụta na e nwere ọtụtụ methenolone enanthate ntụ ntụ, methenolone enanthate ntụ ntụ. Ma otu esi achọpụta onye kachasị methenolone enanthate ntụpụta ihe dị ezigbo mkpa. AASraw ga-abụ nhọrọ kacha mma.
Tags: zụta methenolone enanthate ntụ ntụ, Methenolone Enanthate ntụ ntụ
Ịzụta Methenolone Enanthate ntụ ntụ: adịghị ịzụta ya tupu ị mara ndị a !!!
Methenolone Enanthate ntụ ntụ maka ire: 4 ihe iji Primo n'ụzọ ziri ezi!
Zụrụ elu dị ọcha Tadalafil ntụ ntụ online: Ihe niile ị kwesịrị ịma !!!	Kedu ka esi eji Topiramate uzuzu maka ubu ibu?